छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण (बिहीवार, २५ चैत २०७२)
बैङ्कको दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ९६ दशमलव ६६ प्रतिशत बढेको छ । बैङ्कको गत फागुनमा भएको साधारणसभाले पारित गरेको ४० प्रतिशत बोनस शेयर र १२ दशमलव ७० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरिसकेको छ ।
आरएसआई : न्यूट्रल जोन (३० स्केल)मा छ । खरीदविक्री चाप सन्तुलनमा रहेको छ । स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन ८ दशमलव ७४ बिन्दुमा छ । उतारचढाव सामान्य रहेको छ ।
मुभिङ एभरेज : ७ दिने औसत मूल्यरेखा र २१ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिँदै गएका छन् । हालको मूल्य २१ दिने औसत मूल्यरेखा र टेण्ड लाइनभन्दा तल छ भने ७ दिने औसत मूल्यरेखाभन्दा माथि छ । हालको बिन्दुबाट मूल्य सस्तिएमा रू. १ हजार ८ सयमा टेवा र मूल्य महँगिएमा रू. १ हजार ८ सय ८० मा प्रतिरोध पाउने सङ्केत देखिन्छ ।
- बैङ्कको दोस्रो त्रैमासमा नाफा रू. २० करोड ६२ लाख पुगेको छ । गत आवको भन्दा ९६ दशमलव ६६ प्रतिशत बढी हो । खुद ब्याज आम्दानी ६१ दशमलव २४ प्रतिशत र सञ्चालन नाफा ९५ प्रतिशत बढ्नाले र गत आवमा रहेको रू. २० लाख ६५ हजार खराब कर्जा उठाउन बैङ्क व्यवस्थापन सफल हुनाले खुद नाफा बढेको हो ।
- ब्याज आम्दानी ४४ दशमलव ७५ प्रतिशत र ब्याज खर्च २५ प्रतिशत बढेको छ ।
- जगेडा कोष ७८ प्रतिशत बढेर रू. ५९ करोड ८२ लाख र कर्जा तथा सापटी ३६ प्रतिशत बढेर रू. ८ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ ।
- बैङ्कले सम्भावित जोखीमवापतको व्यवस्थामा रकम ३० प्रतिशत बढाएर रू. २ करोड ४ लाख छुट्ट्याएको छ ।
- गत आवमा चुक्ता पूँजीको तुलनामा खुद नाफा ३६ दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको थियो । तर, चालू आवमा योे अनुपात घटेर ३४ दशमलव ६२ प्रतिशतमा झरेको छ ।
- पूँजी कोष लागत ७ दशमलव ६२ प्रतिशत र पूँजी कोष पर्याप्तता १४ प्रतिशत रहेको छ ।
- गत पुस मसान्तसम्ममा विगत १२ महीनाको आम्दानीका आधारमा प्रतिशेयर आम्दानी रू. ६९ दशमलव २७ छ । सो आम्दानी र शेयरको पछिल्लो कारोबार मूल्यको आधारमा निकालिएको पीई रेशियो साढे २४ गुणा छ । हालको शेयर मूल्य नेटवर्थको साढे १२ गुणा छ ।